Ordinhazi Ijikwa Ahịa forwa niile maka Otu Azụmaahịa na Mba 23 | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 9, 2017 Nate Holmes
Dị ka akara ụwa, ị nweghị otu zuru ụwa ọnụ ndị na-ege ntị. Ndị na-ege gị ntị nwere ọtụtụ mpaghara na mpaghara. N'ime n'ime ndị na-ege ntị ọ bụla nwere akụkọ doro anya iji jide ma gwa. Akụkọ ndị ahụ apụtaghị n'ike n'ike. A ga-enwerịrị ụzọ ịchọta, ijide, na ịkekọrịta ha. Ọ na-achọ nkwukọrịta na imekọ ihe ọnụ. Mgbe ọ mere, ọ bụ ngwaọrụ dị ike iji jikọta akara gị na ndị na - ege gị ntị. Yabụ kedu otu esi ejikọ aka na ndị otu gafere mba iri abụọ na atọ, asụsụ ndị bụ isi, yana oge iri na ise?
Iwulite udiri ahia zuru uwa: nke bu eziokwu na akwukwo 50 nke akwukwo nduzi
Guidelineskpụrụ nduzi dị mkpa maka ịnọgide na-enwe akara ngosi na-agbanwe agbanwe. Ha na-enye ndi otu gi ihe omuma a bu onye, ​​gini, gini kpatara ya, na otua esi eme ya. Mana ederede peeji 50 nke ụkpụrụ akara agaghị eto akara ụwa. Ọ bụ naanị otu mpempe kwesịrị ijikọ na akụkọ ndị ahịa yana ọdịnaya iji gwa ha.
You etinyela oge dị ukwuu na ego iji banye n'achụmnta ụwa zuru ụwa ọnụ naanị ka ịchọta ndị otu gị gburugburu ụwa ka ha ghara ịzaghachi? Nnukwu ụkpụrụ nduzi naanị agaghị etinye ndị otu aka gburugburu ụwa mgbe ịhapụ otu. Ọbụlagodi na ọ nwere iwu niile ma maa mma, ọ gaghị adị ndụ. Na agbanyegodi ọmarịcha ọrụ na-eme, ọdịghị ezigbo mbọ iji kesaa mba niile.
Ahịa ụwa kwesịrị ịzụ ahịa na ndị na-ege ntị na mpaghara ma tụkwasị obi na ndị ahịa gị iji nyefee mkpọsa ahịa mpaghara
Ndị na-ege gị ntị ebughi. Ọ dịghị otu mkpokọta "zuru ụwa ọnụ" na-ege ntị na gị otu nwere ike ilekwasị anya. Ndị na-ege gị ntị nwere ọtụtụ ndị na-ege ntị na mpaghara. Mgbe ị na-anwa ịre ahịa nye onye ọ bụla site na iji otu asụsụ na foto ndị ahụ, ị ​​ga-ejedebe foto foto nke ọ na-enweghị onye ọ bụla metụtara. Tọ iji nye ndị otu ọrịre ahịa ọ bụla gafere mba iri abụọ na atọ aka ijide ma kesaa akụkọ ndị ahụ, akụkọ ndị a ga-abụzi isi maka akara ọhụụ ọhụrụ na nke ka mma.
Akụkọ ụwa gị mejupụtara akụkọ mpaghara
Ahịa ụwa enweghị ike ịbụ otu ụzọ site n'isi ụlọ ọrụ. Ntuziaka na ntụzịaka sitere n'isi ụlọ ọrụ dị mkpa, mana atụmatụ gị zuru ụwa ọnụ ekwesịghị ileghara uru ndị dịkarịrị nso na ndị na-ege ntị akara anya na-agwa. Okwesiri inwe mgbanwe n’echiche na ọdịnaya n’etiti isi ụlọ ọrụ na ndi otu gburugburu ụwa. Nke a gbatịrị iru akara gị wee nye ndị otu ụwa zuru ụwa ọnụ nke ika ahụ.
Philosophydị “ikwe imepụta ihe” a na nkà ihe ọmụma ọ bụghị naanị na-enye ndị otu mpaghara ikike ma na-enye akụkọ dị mma na ọdịnaya maka ndị otu mpaghara ndị ọzọ yana isi ụlọ ọrụ ha. N'inwekwu echiche na ịkekọrịta ọdịnaya, akara ahụ ga-adịwanye mma ma dị ndụ.
Ijikọ ndi otu ahia gafere mba iri abụọ na atọ
Mgbe ị na-arụ ọrụ gafee oge oge 15 dị iche iche, ịnweghị ike ịdabere na oku iji bụrụ naanị ụzọ ha si ekwurịta okwu, ọkachasị mgbe ị na-emekọ ihe gbasara akụrụngwa nke mba ndị na-emepe emepe nwere ike ibute ịkpọ oku mgbe niile. Logbasa ụdị ọrụ ịchụ onwe onye n’onwe na-enyere ndị otu aka inweta ihe ha chọrọ, mgbe ha chọrọ ya.
Ndị otu kwesiri ịtọlite ​​a njikwa ihe onwunwe di iche iche (DAM) sistemụ. Usoro DAM bu ihe omimi, inweta uzo ebe onye obula nwere ike inweta ma obu tinye ọdịnaya. Ọ na-eme ka ịkesa akụkọ na ọdịnaya. Mepụta uru maka ndị ahịa a na-arụsi ọrụ ike nyere aka na-eto eto na usoro, ebe standalone brand doc dara.
Sistemụ DAM na-arụ ọrụ dị ka ebe etiti ọdịnaya maka ndị otu niile. Ọ na-enye ha ike ijikọ ma nyochaa ọdịnaya nwere akụkọ ndị ha nwetara, ọ na-enyekwa nghọta n'ụzọ dị mfe ihe otu ndị ọzọ na-eke. Iji usoro DAM na enye ikike isi ụlọ ọrụ, ndị otu mpaghara, na ndị ọzọ iji rụkọta ọrụ - ọ bụghị naanị na-arụ ọrụ n'otu n'otu.
Kedu otu njikwa ihe onwunwe dijitalụ na-ejikọ mba 23
Gba onye na-ese foto mpaghara iji jide akụkọ ndị ahịa, na iji foto na mkpọsa ahịa mpaghara. Ma ọ kwụsịghị ebe ahụ. Enwere ike itinye foto na usoro DAM ma nyochaa maka ogo na metadata ekenyere. Ha ga-enwezi ike iji ha maka ndị enyemaka ọzọ, ozi ndị ọzọ na-atọ ndị ọzọ, yana isi ụlọ ọrụ maka akụkọ kwa afọ. Ftgbanwe ihe gbadoro anya n’inyere ndị otu na-ere ahịa na mpaghara ha aka enyela mgbasa echiche, gbasaa mgbasa ozi ahịa, na ịkekọrịta akụkọ ọma.
Tags: njikwa arịa mmụta egombọndamnjikwa ihe onwunwe dijitalụzuru ụwa ọnụahịa ụwagbasaa
Nate Holmes bụ onye nhazi ahịa maka Gbasawanye idlọ Ọrụ na ya Ihe onyonyo ndọtị ika. Nate nwere ezigbo mmasị na njikwa njikwa, ịre ahịa ọdịnaya na nyocha ahịa. Nate na-arụ ọrụ na ndị mmadụ nwere nzụlite dị iche iche na nzukọ nke nha niile, sitere na site na ndị otu nkwukọrịta ahịa na nnukwu ụlọ ọrụ na ndị isi ụlọ ọrụ azụmaahịa pere mpe.
Na-ere N'Onlinentanet: etechọpụta Ihe Prozụta Ihe Prochọpụta Ihe Pro Ga-achọ